Lunch Bag ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Lunch Bag Factory
ရေစိုခံ Polyester သိုးမွေးစားပွဲစောင် ...
Adj နှင့်အတူ Insulated ခရီးဆောင် Oxford အထည် Cooler အိတ် ...
Polyester အပူလျှပ်ကာအစားအစာပေးပို့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြု ...
Polyester နှစ်ဖက်ကိုင်တွယ်နိုင်သော Picnic အေးအိတ်
ဖက်ရှင်နှင့်အတူ Polyester extensible casserole လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအိတ် ...
နေ့လည်စာအိတ်၏အပြင်ဘက်တွင်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်လွယ်ကူစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက်အောက်စ်ဖို့ဒ်ထည်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ အားကြီးသောလက်ကိုင်များနှင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်နိုင်လွန်သည်သိပ်သည်းသောချုပ်ရိုးဖြင့်အိတ်ကိုအလွန်ကြာရှည်ခံစေပြီးသင်၏နေ့လည်စာကိုသယ်ဆောင်ရသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူသည်။ နေ့လည်စာအိတ်၏နံရံတွင် PEVA သတ္တုပါးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအိတ်ထဲပူနေသောအခါလွယ်ကူစွာအရည်ပျော်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ဇစ်ကို အသုံးပြု၍ ကျိုးပဲ့သောဇစ်ကိုဖြစ်နိုင်ချေအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ အဆိုပါနေ့လည်စာအိတ်အစားအစာများကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည့် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် ...
Adjustable ပခုံးသိုင်းကြိုးနှင့်အတူ Insulated ခရီးဆောင် Oxford အထည် Cooler အိတ်
နေ့လည်စာအိတ်၏အပြင်ဘက်တွင်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်လွယ်ကူစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက်အောက်စ်ဖို့ဒ်ထည်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ နေ့လည်စာအိတ်၏နံရံကို PEVA သတ္တုပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအိတ်ထဲပူနေသောအခါလွယ်ကူစွာအရည်ပျော်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ ဒီအအေးအိတ်အိတ်တွင်ချိန်ညှိနိုင်သောပခုံးကြိုးများပါရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ဇစ်ကို အသုံးပြု၍ ကျိုးပဲ့သောဇစ်ကိုဖြစ်နိုင်ချေအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ အဆိုပါနေ့လည်စာအိတ်အစားအစာများနှင့်အချိုရည်4နာရီကျော်အအေးသို့မဟုတ်ပူနွေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည့် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အပြင်အတွင်းပိုင်းနံရံမီတာဖြစ်ပါတယ် ...
ကလေးများအတွက် 2020 အရည်အသွေးမြင့် insulated နေ့လည်စာအိတ်
နေ့လည်စာအိတ်၏အပြင်ဘက်တွင်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်လွယ်ကူစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက်အောက်စ်ဖို့ဒ်ထည်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ နေ့လည်စာအိတ်၏နံရံကို PEVA သတ္တုပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအိတ်ထဲပူနေသောအခါလွယ်ကူစွာအရည်ပျော်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ ဒီအအေးအိတ်အိတ်တွင်ချိန်ညှိနိုင်သောပခုံးကြိုးများပါရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ဇစ်ကို အသုံးပြု၍ ကျိုးပဲ့သောဇစ်ကိုဖြစ်နိုင်ချေအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ အဆိုပါနေ့လည်စာအိတ်အစားအစာများနှင့်အချိုရည်အေးမြသို့မဟုတ်နွေးထွေးသောကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည့် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အပြင်အတွင်းပိုင်းနံရံများကို PEVA အမျိုးအစားအစားအစာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကလေးများအတွက်နွေရာသီရောင်စုံ Insulated Ice Lunch Bag အိတ်
Lunch Bag သည်တာရှည်ခံသော 600D Polyester၊ အစားအစာလုံခြုံသော PEVA နံရံနှင့်ကြံ့ခိုင်သောဇစ်ပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါနေ့လည်စာအိတ်အစားအစာများနှင့်အချိုရည်အေးမြသို့မဟုတ်နွေးထွေးသောကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည့် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်အတွင်းပိုင်းနံရံများကို PEVA သတ္တုပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင်၏အစားအစာများကိုအိတ်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။ ခရီးဆောင်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေါ့ပါးသည့်နေ့လည်စာလက်ဆွဲပုံးတစ်ခုစီသည်ကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားရှိသောသေတ္တာများ၊ မုန်လာဥနီများ၊ လက်သုတ်ပုဝါနှင့်တန်ဆာပလာများအတွက်ရှေ့အိတ်ကပ်ပါဝင်သည်။ ...
Lunch Bag သည်အလွန်ကြာရှည်ခံသည့်ကတ္တီပါဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ အစားအစာလုံခြုံသော PEVA နံရံနှင့်ကြံ့ခိုင်သောဇစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါနေ့လည်စာအိတ်အစားအစာများနှင့်အချိုရည်အေးမြသို့မဟုတ်နွေးထွေးသောကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည့် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်အတွင်းပိုင်းနံရံများကို PEVA သတ္တုပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင်၏အစားအစာများကိုအိတ်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။ ခရီးဆောင်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေါ့ပါးသည့်နေ့လည်စာလက်ဆွဲပုံးတစ်ခုစီသည်ကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားရှိသောသေတ္တာများ၊ မုန်လာဥနီများ၊ ဤထုတ်ကုန်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသော ...
နေ့လည်စာအိတ်မှာ 600 D Polyester၊ အစာအာဟာရပြည့်ဝသော PEVA နံရံနှင့်ကြံ့ခိုင်သောဇစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါနေ့လည်စာအိတ်အစားအစာများနှင့်အချိုရည်အေးမြသို့မဟုတ်နွေးထွေးသောကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည့် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်အတွင်းပိုင်းနံရံများကို PEVA သတ္တုပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင်၏အစားအစာများကိုအိတ်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။ သင်သည်မည်သည့်ဂိမ်းနေ့ရက်ကာလ၌သင်၏အဖျော်ယမကာရေခဲအအေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်အေးခဲအိတ်၌ပင်ရေခဲဖြည့်စခွေငျးငှါ! အဆိုပါနေ့လည်စာအိတ်ရောင်စုံပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဒီစတိုင်ကျတဲ့နေ့လယ်စာတုတ်အိတ် ...
ကျားသစ် - ပုံနှိပ်ခြင်း Logo နှင့်အတူပုံနှိပ်ထားသောနေ့လည်စာအိတ်
Lunch Bag သည်အလွန်ကြာရှည်ခံနိုင်သည့်ကတ္တီပါဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ အစားအစာအတွက်အန္တရာယ်ကင်းသော Alu သတ္တုပါးနှင့်ကြံ့ခိုင်သောဇစ်ပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါနေ့လည်စာအိတ်အစားအစာများနှင့်အချိုရည်အေးမြသို့မဟုတ်နွေးထွေးသောကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည့် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်အတွင်းနံရံများကိုအစားအစာတန်းစား Alu သတ္တုပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင်၏အစားအစာများကိုအိတ်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။ ဒီစတိုင်ကျတဲ့နေ့လယ်စာတုတ်အိတ်ဟာကျစ်လျစ်ပြီးသင့်တော်တဲ့အစားအစာ (သို့) မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုယူရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ၂ လက်တိုတိုလေးကသင့်ကိုလျင်မြန်စွာကောက်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။